Nezvedu - EVERGREEN KUPAKITIRA NOKUDZIDZA CO., LTD
Yako yaunovimba sosi yekushanduka kurongedza!
Yegirini yakasvibirira kurongedza uye kudhinda (EPP) inodyara mune yazvino yekupakata mainjiniya uye tekinoroji, uye inozvibatanidza mune yayo yakazara yakakwana inoshanda sisitimu yekugadzira michina.
Iyo sisitimu inosanganisira 7 + 1 9 + 1, 7 + 5 yekumhanyisa yekudhinda muchina 3 seti, lamination muchina maseti matatu (lamination upamhi kusvika 1600mm), mabhegi kugadzira muchina 7 seti, module yekucheka muchina 2 seti.
Isu tinoisa uye tinoshandisa iyo Lab, iyo inoshongedza kudzokorora muyedzo, kumanikidza muyedzo, kuputika tester, slip tester, enlongation uye simba tester, uye, kumanikidzwa gungano ovhoni, kuve nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvese zvichachengetedzwa neepamusoro standard mhando chikumbiro mukugadzirwa.
Nemarezinesi ekugadzira chikafu chinogadziriswa kurongedza, zvese mbishi zvigadzirwa zvinotengwa kubva kune yakakwira fekitori iyo ine yakasimba yemhando kutonga.
EPP inotarisisa zvakanyanya kuchengetedzeka, zvigadzirwa zvehutsanana, uye zvakavanzika, zvine 24-awa murindi, yakavharwa redunhu terevhizheni yekutarisa system, uye auto alarm.
Isu tinosimbisa zvivakwa mukugadzirwa kwehutsanana uye tinopa kuongorora kwevakajairika kwevashandi. Waste-mafirimu ari 100% granulated kudzivirira kubva kune zvisirizvo mashandisiro emahombekombe nemakona.
Vashandi paEPP iboka rehunyanzvi avo vanogadziriswa nemhedzisiro, tekinoroji-savvy, uye yakanangana nebasa. Vazhinji vavo vaive nemakore ezviitiko mukutungamira anoshanduka mafekitori mafemu vasati vapinda EPP. Ivo vanoratidzwa kuva sosi yakakosha yekukura nekukurumidza kwekambani nekunzwisisa kwavo kwakadzama kwemapakeji ekushandisa uye kugona kwavo kusingaperi kwemhinduro dzakakodzera dzeakasiyana vatengi zvinodiwa.
Inotungamirwa nehunyanzvi hwedu hwehukama hwe "mhando hupenyu hwedu", tinopa vatengi vedu mukana wehunyanzvi hwazvino uye zvigadzirwa, vane ruzivo rwekutakura zvinhu, mhando yepamusoro, inodhura yemitengo chimiro, uye nehunyanzvi sevhisi. EPP yave iri mutengesi mukuru wepakeji mhinduro kune akawanda emakambani emarudzi mazhinji uye anotungamira mafemu emakambani akasiyana siyana, kusanganisira China yenyika yekudyara Corp, Shandong munyu kutengesa Corp, Shanghai tiantong yegungwa boka, Shanghai PET chikafu Inc nevamwe. Kuwedzera kuChina, zvigadzirwa zvedu zvave zvichishandira misika muNorth America, EU, Oceania, Japan, South Korea, Russia, nezvimwe.
Chero zvingave zvako zvekutakura zvaunoda, EPP yakagadzirira kupa zvinodhura-zvakagadziriswa mhinduro nehupamhi hwemhando uye kuvimbika.